Mujaahidiinta Shaam oo guulo waaweyn soo hooyay, iyo dhul ballaaran oo soo galay gacantooda. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Mar 23, 2017 311 0
Gobollada Dimishiq iyo Xammaah ee dalka Suuriya waxaa ka soconaya dagaallo malaaxim ah oo u dhexeeya ciidamada Mujaahidiinta Shaam iyo malleeshiyaadka Nusayriyada Bashaar Al-Asad oo taageero ka helaya kuwa Rawaafida jinsiyadaha kala duwan ee duulaanka ku jooga dalka Suuriya.
Dagaalka Dimishiq oo billowday billowgii todobaadkan waxay Mujaahidiintu xamladoodu ugu magac dareen “ Adoomada Allow sugnaada”, waxaana dagaalka ugu xoogan uu ka socodaa xaafadda Jowbar ee Dimishiq.
Howlgalkan waxaa lagu daah furay labo camaliyadood oo Istish-haadi ah oo ay fuliyeen Ansaari iyo Muhaajir oo katirsan hay’adda TaxriiruShaam oo ah jamaacada jihaadiga ee hogaamineysa malxamadan.
Goobo istiraatiiji ah oo katirsan magaalada Dimishiq ayay Mujaahidiintu gacanta ku dhigeen, waxaana ay ku guuleysteen iney isku furan xaafadaha Jowbar iyo Al-Qaabuun oo iyadana ku xireysa deegaanka Quudhada bari ee dhaca duleedka Dimishiq.
Mandiqadda Warshadaha, shirkadda Korontada, iyo saaxada Cabaasiyiinta ayay Mujaahidiintu la wareegeen, waxaana soconaya dagaallo kulul, iyadoona macnawiyaadka Malleeshiyaadka Nusayriyada Iyo Rawaafidu ay tahay mid liidata.
Markii ugu horreysay diyaaradaha Nidaamka iyo kuwa Ruushka ayaa garaacaya bartamaha Dimishiq oo mudooyinkii dambe ahayd meel ay ku aamin qabaan malleeshiyaadka Nidaamka, waxaana taas lagu tirinayaa isbedel muuqda oo uu galay dagaalka Suuriya, maadaama godkii ugu dambeeyay ee Bashaar uu ku noolaa uu imanka biyo ugu galay.
Dhanka kale gobolka Xammaah ee dalka Suuriya ayaa isaguna waxaa ka socda xamalo loogu magac daray “ Shaqeeya”, taas oo ay ku dhawaaqday hay’adda Taxriiru-Shaam.
Dagaallo labo maalmood socoday waxay Mujaahidiintu kula wareegeen magaalooyin istiraatiiji ah iyo tuulooyin farabadan oo horey ay ugu sugnaayeen Nidaamka.
Magaalooyinka gacanta Mujaahidiinta soo galay waxaa kamid ah Sowraan, Macardoos, Al-Iskandariyah iyo kuwa kale, waxaana isku darka magaalooyinka iyo tuulooyinka raayada Towxiidka laga taagay ee gobolka Xammaah ay kor u dhaafayeen 20 magaalo.
Mujaahidiintu waxay markii ugu horeysa wax kayar 3KM u jirsadeen magaalada qadiimiga ah ee Xammaaah oo ah xarunta gobolkaas, waxaana la rajeynayaa in taqadumkaas uu sii socodo.
Labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa gobolka Xammaah oo kaliya ka dhacay saddex camaliyadood oo istish-haadi ah oo ay fuliyeen guutada istish-haadiyiinta ee hay’adda Taxriiru-Shaam, waxaana raga fuliyay camaliyaadkaas ay isugu jiraan Ansaar iyo Muhaajirin, waxaana taas ay ku tuseysaa in dagaalka ka socoda Shaam aysan dhalinyarada Muslimiintu u kala harin.
Dhanka kale deegaano dhaca duleedka magaalada Al-Raqqa ee dalka Suuriya waxaa laga soo sheegaya duqeymo culus oo diyaaradaha taxaalufka iyo kuwa Ruushku ka geysteen, waxaana jira dad dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeymahaas oo Muslimiin ah.
Wixii kusoo korhda dagaallada ka socoda dhulka barakeysan ee Shaam, waxaan idin kugu soo gudbin doonnaa barnaamijyada soo socda sida Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka, inagoona idin soo gudbin doonnaa codadka Istish-haadiyiin kala duwan oo ka qeyb qaatay malxamada ka socota magaalada Dimishiq iyo gobolka Xammaah.